Ninka ugu taajirsan dunida oo “baad” laga dalbaday | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Ninka ugu taajirsan dunida oo “baad” laga dalbaday
Ninka ugu taajirsan dunida oo “baad” laga dalbaday
Aasaasaha bogga laga dukaameysto ee Amazon.com Jeff Bezos, oo ah ninka dunida ugu taajirsan ayaa ku eedeeyay maamulaha wargeys laga leeyahay dalka Mareykanka inuu handaday.
Wuxuu sheegay in shirkadda American Media Inc (AMI), ay dooneysay inay ka hor istaagto baaritaanka uu ku sameynayo sidii ay ku heleen farriimihiisa gaarka ah.
Mr Bezos iyo xaaskiisa Mackenzie ayaa bishii hore sheegay inay kala tagayaan.
Saacado kaddib wargeyska ayaa daabacay arrintaas, isagoo soo xigtay farriimo gaar ah oo ay arrimo qoys uga hadlayeen.
AMI ayaa ayaan weli ka jawaabin eedeyntaas.
Muxuu Bezos sheegay?
Mr Bezos ayaa barta internet-ka soo dhigay email uu sheegay inay soo direen wakiillada AMI, iyagoo ugu hanjabaya inay soo bandhigi doonaan “sawirro khaas ah” oo laga qaaday isaga iyo gabar ay is jecel yihiin, Lauren Sanchez.
Bilyaneerkan, oo sidoo kale ah milkiilaha wargeyska the Washington Post, ayaa sheegay in AMI ay ka dooneysay inuu bulshada been u sheego isagoo xusaya in sida uu wargeysku uga warramo isaga iyo saaxiibtiis aysan ahayn wax la siyaasadeeyay.
Marka l eego email-ka uu Mr Bezos soo dhigay barta internet-ka, qareen ka tirsan AMI ayaa soo jeediyay in sawirrada aan la daabici doonin haddii Bezos uu soo saaro war saxaafadeed uu ku caddeynayo inaysan jirin wax ay ka shakiyaan.”Intii aan oggolaan lahaa baad iyo handadaad,” ayuu yiri Mr Bezos, “Waxaan go`aansaday inaan soo daabaco waxa ay ii soo direen.” Mr Bezos ayaa sidoo kale xusay xiriirka ay AMI la leedahay madaxweyne Donald Trump.
“Intii aan oggolaan lahaa baad iyo handadaad,” ayuu yiri Mr Bezos, “Waxaan go`aansaday inaan soo daabaco waxa ay ii soo direen.” Mr Bezos ayaa sidoo kale xusay xiriirka ay AMI la leedahay madaxweyne Donald Trump.
Muxuu carrabka ugu dhuftay Trump?
Mr Bezos ayaa sheegay in lahaanshaha Washington Post ay u soo jiidday cadow badan, oo uu ku jiro madaxweyne Trump, oo saaxiib la ah madaxa AMI, David Pecker.
AMI ayaa dhowaan qiratay inay ku lug lahayd ololihii doorashadii madaxtinnimada ee Trump, kaddib markii ay lacag gaareysa $150,000 (£115,000) siiyeen gabar dharka xayeysiisa sida ay u qariso xiriirkii la sheegay inay la lahayd Mr Trump.
Mr Bezos ayaa qoraalkiisa ku xusay sida ay AMI u qiratay inay adeegsadeen habka heshiiska “qabo ee dil” si ay meesha uga saaraan sheekada Karen McDougal, ee wax u dhimmi lahayd Trump.
Maxaa ku dhici kara sumcadda Bezos?
Madaxa Amazon ma uusan laftigiisa ma uusan dafirin sumcad xumada uu la kulmi karo, isagoo sheegay “dabcan ma doonayo in sawirrada khaaska ah la daabaco”. Isagoo sheegay in AMI ay si xun u adeegsato warbaahinta.
“Sidoo kale ma doonayo inaan qayb ka noqdo dhaqanka handadaadda ee ay caanka ku yihiin, danaha siyaasadeed, weerarrada siyaasadeed iyo musuqmaasuqa. Waxaan door dibayaa inaan ka hadlo, kaddibna aan arko waxa ka soo baxa.”
Previous articleSheeko Xariir Layableh oo Siyasi jamaal cali Xuseen kasmeeyay Sideetankii Milyan ee Xildhibaan Buubaa Sheeegay in Lagu Leeyahay dawlada Somaliland
Next articleXisbiga Wadani Ilaa imnka lama akhriyin Siyaasiyan, Lakiin Hure Buubaa waynu Ognahay in aanu ka gacan madhnayn xamar, siyaasi cabdirashiid riyoraaac
Maxay tahay sababta Itoobiya ay u xireyso dhammaan dugsiyada sare ee dalka?